WOWOW Buuxi Dheriga Ganacsiga Darbiga Ganacsiga Mount Mount Faucet Matte Black Pot Filler Filler Faucet Rotatable Faucet Brass Kitchen Kitubt
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada / WOWOW Filler Dheriga Ganacsiga Darbiga Ganacsiga Mount Faucet Matte Black Pasta Arm Faucet
WOWOW Filler Pot Commercial Wall Wall Mount Faucet Matte Black Pasta Arm Faucet
Buuraha Dheriga Dhegaha: 1/2 NPT isku xira dunta (cabirka caadiga ah ee Mareykanka), hal god oo ah buuraha dheriga dhejiska, kaliya ku habboon biyo qabow (ma aha qase). Dhammaan xirmooyinka rakibidda waxay ku jiraan xirmada.
Qasabad isku laabma oo fidsan. Waxaad ku laalaabi kartaa gidaarka marka aan la isticmaalin, si aad u badbaadiso booska jikada.
Buuxi Dheriga Dheriga Matte Black: Wuxuu ka samaysan yahay 100% alaab naxaas ah oo tayo sare leh, ka hortagga miridhka iyo daxalka, wuxuu hubiyaa cimri dherer iyo nadiifin fudud. Iyada oo leh dusha gudaha oo la safeeyey, adkaysan oo aan daadanayn. Dhammaystir madow oo matte ah, faraha-ka-hortagga iyo ka-hortagga oksaydhka.
Neoperl Aerator: Ku qalabaysan aerator Neoperl ABS oo tayo sare leh, wuxuu abuuraa durdur hawo fiican leh, deggan oo aan buuq lahayn. Intaa waxaa dheer, waxay kaa caawin kartaa inaad keydiso biyaha!
Dammaanad, Adeeg Macaamiil: Dammaanad 5 sano ah iyo taageero macmiil oo waqtigeedii la bixiyo. Waxaa daboola 90 maalmood oo soo noqosho xaddidan leh. Fadlan nagala soo xiriir amarkaaga, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan kuu caawino.
WOWOW Fill Faucet Folding 2311100RB: Laab-biyo-qabad buuxiyaha dhejiska, qaab-dhismeedka naxaasta ah ee qasabadda, qasabadda jikada oo leh maro aad u fiican, xoq-u-adkaysta, fududahay in la maydho, naxaas-nadaafad sare leh, awood badan, madax-la'aan, daxalka u adkaysta. Faraha Farta u adkeysta, waarta, amniga deegaanka & caafimaadka.
Goos goos goos goos goos ah iyo warshadaha waxsoosaarka warshadaha, buuxiyaha kiishkan ayay u egtahay inuu ka dhigi karo bayaanka ugu fiican jikadaada. Qashin-qubka tuubada-qolka-jikada waxay ka baxaan meel badan oo miisaska loogu talagalay shaqada diyaarinta, isku-darka labada weji ee qasabaddan iyo 360 digsi tuutaha isku-darka wuxuu ku darayaa sahlanaan si aad u qanciso xargahaaga halka kariyaha ama jikada ka dibna nadiifi darbiga.
Tuubooyinka buuxinta dheri -jikada oo leh qaab -dhismeed dhammaystiran oo shaqeynaya: Waxaa jira laba walaalo oo keliya oo loogu talagalay koontaroolaha socodka laba -geesoodka ah, isku -darka isku -darka ah ee fidsan wuxuu gaarayaa 20 ″, iyo qasabadda bir -birta ah ayaa ka shaqeysa jidka marka aan la isticmaalin. Buuxinta dambiilayaasha ku dhowaad baahi kasta oo wax karinta waligeed ma sahlaneyn marka la isticmaalo buuxinta burooyinka. Qalabaynta dhajinta gidaarka gaarka ah waxay u oggolaanaysaa boos dheeri ah miiskaaga iyadoo isla mar ahaantaana bixineysa faa'iido gaar ah.
Qasabadda weelka jikada oo leh QIIMO BIYO BADAN: Qasab gacmeed keli ah oo lagu rakibay hawo -mareenka neoperl ayaa siisa cadaadis joogto ah iyo durdur biyo oo joogto ah.
HUBIN FUDUD IYO Damaanad 3 SANO: Cabbirka dunta ee qasabadan waa 1/2 ″ NPS waxaana lagu dhejin karaa 1/2 ″ NPS oo lagu xiraa 1/2 ″ NPT isku xirayaasha, u isticmaal biyo qabow oo kaliya. Way fududahay in la sameeyo iyadoo la isticmaalayo wrench hexagon. Fadlan nala soo xiriir haddii aad qabtid wax su'aalo ah.
Shahaadada NSF shahaadada dhoobada dhoobada waxay bixisaa shaqo ka madaxbanaan dareere: Kaydadka dhoobada ee aan leedhka lahayn waxaa aqoonsaday NSF, iyadoo hubineysa in tirada leedhka biyaha wareegga ahi waafaqsan yihiin heerka badbaadada, yaraynaya dhaawaca tooska ah iyo ilaalinta dadka aad jeceshahay. Fiilooyinka dhoobada ayaa si fudud u leexda. Ma jiro mug mug leh marka biyuhu socdaan.
Naqshadeynta Waqtiga oo ay weheliso tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay: Iyada oo leh laba kala -goysyo is -rogid, waxay u suurtagelinaysaa buuxiyuhu in uu ka leexdo jidka marka aan la isticmaalin. Waxaa laga yaabaa inay gaadho ugu badnaan 20 ″ oo dib uga noqoto marka aan la isticmaalin, waxay bixisaa dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn. Ku qalabaysan naxaas xidhtay waalka gacan kasta, oo aad ugu habboon xakamaynta xawaaraha socodka biyaha ama biyaha ka xidha labada weelka ama derbiga, hawl fudud oo hal gacan ah
Kala sooc: tubbada musqulaha shaambada lagu buuxiyo
Naqshadaynta: Laba Geliyaha Hoyga ah ee Hal Kali Ah Oo La Galiyay
Maaddooyinka: Birta / Birta / Aan Jirin / Xarka
Nooca Dejinta: Albaabka Xarkaha
Tirada Xeerarka: Gacan laba-laab ah
Biyo Biyo: Kaliya Biyo Qabow
Dhererka Guud: 20.23 ″
Isweydaarsiga Ganacsi-Nooca Dual Wadajirka ah ee Wadajirka ah
Xirmooyinka Ceramic, waxaa la heli karaa oo la xiri karaa 500,000 oo jeer
Qulqulka tuubada waa la wareegi karaa, wareegga wuxuu noqon karaa 360 °
Waa maxay sanduuqa:
Laba jibbaar Foornada Jikada Dheeca Jikada
Qalabka lagu rakibo
SKU: 2311100B Categories: Qubeyska jikada, Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada Tags: Qolka jikada, Biyaha, Mount Mount
Dheriga saliida qasabada saliida qasacaysa naxaas
Dheriga Weelka Buuxda
Isku-laabidda Isku-xidhka qasabadda